कुवेतविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? (LIVE) - Everest Dainik - News from Nepal
कुवेतविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका? (LIVE)
काठमाडौं, साउन ११ । सिंगापुरमा जारी आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले कुवेतविरुद्ध टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ । खेल नेपालीसमयअनुसार बिहान ७ः१५ बजेदेखि सुरु भएको छ । चोटका कारण मलेसियासँगको खेल गुमाएका कप्तान पारस खड्का टोलीमा फर्किएका छन् ।
मलेसियासँगको खेलबाट नेपालले १ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । कप्तान पारसले कमब्याक गर्दा प्रदीप ऐरी प्लेइङ ११ मा स्थान बनाउन असफल भएका छन् । नेपालको प्लेइङ –११